कमल केसी बिहीबार, ५ फाल्गुण, २०७८
गत शनिबार माघ २९ गते सूचना प्रविधि कम्पनी योङ माइन्ड्स आफ्नो १५ औं वार्षिकोत्सव मनाएको थियो । वेबसाइट बनाउने कामबाट शुरू भएको कम्पनीले अहिले सरकारी निकायका अधिकांश सिस्टम विकास गरेको छ ।
अहिले योङ माइन्ड्स आफुलाई सफ्टवेयर कम्पनी भन्दा पनि आइसिटी कम्पनी भन्न रूचाउँछ र त्यसअनुसार काम पनि गरिरहेको छ । १५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा योङ माइन्ड्सका संस्थापक निर्देशक डा. अभिजित गुप्तासँग आइसिटी समाचारका लागि कमल केसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
१५ वर्षको यो यात्रालाई कसरी संस्मरण गर्नुहुन्छ ?
हामी स्क्र्याचबाट उठेका हौं । सानैदेखि नेपालमै केही गर्नु पर्छ भन्ने योजना थियो । त्यसैअनुसार सन् २००८ मा मैले योङ माइन्ड्स कम्पनी स्थापना गरेको थिए । वेबसाइट बनाउने र आउटसोर्सिङ गर्ने सानो कामबाट हाम्रो यात्रा शुरू भएको हो ।
आज हामी नेपालको अग्रणी आइसिटी कम्पनी हौं । नेपाल सरकारको अधिकांश निकायसँग काम गरेका छौं । देश बाहिर हङकङ र अष्ट्रेलियामा कार्यालय स्थापना गरेर हामीले काम गरिरहेका छौं । १५ वर्षे यात्रा एउटा राम्रो अनुभव रह्यो ।
कस्ता कस्ता प्रोजेक्टमा तपाईहरूले काम गर्नुभएको छ ?
हामीले सानो एप्लिकेसनदेखि लिएर ठूलो इन्टरप्राइजेज एप्लिकेसनसम्ममा काम गरेका छौं । विभिन्न सरकारी निकायका लागि आवश्यक सिस्टम बनाएका छौं ।
सफ्टवेयर तथा वेब एप्लिकेसन, डेटा ड्रिभन एप्लिकेसन, वृहत डेटा बेस एप्लिकेसन, सेक्युरिटी र इन्फ्रास्टक्रचर अडिट, ग्याप एनालाइसिस, निड एसिसमेन्ट, गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्ट अडिट लगायतका प्रोजेक्टमा काम गरेका छौं । अहिले आएर हामी टिपिकल वेबसाटइट, सफ्टवेयर कम्पनीभन्दा पनि आइसिटी कम्पनी भनेर अगाडि बढेका छौं । त्यसअनुसार फरक फरक डोमेनमा काम गरिरहेका छौं ।
हामी डिजिटल रूपान्तरणको कुन अवस्थामा छौं ?
हामी डिजिटल रूपान्तरणको दोस्रो चरणमा छौं । अब यसलाई चरणमा कसरी विभाजन गर्ने कुरा पनि हुन्छ । मेरो विश्लेष्ण अनुसार शुरूवाती दिनमा बढी पेपरमा आधारित थियौं । अब हामी एप्लिकेसन ओरियन्टेड छौं । सबै कुरा सिस्टमबाट हुन्छ ।
अहिले आएर सबै पब्लिक एजेन्सीहरूसँग आ-आफ्नो एप्लिकेसन छ । मैले किन फेज टु (दोस्रो चरण) भनेभन्दा अब चाहिँ सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा डिजिटल्ली होस् भन्ने तिर पहल गरिरहेको छ ।
डेटा एक्सेचेन्जको कुरा फेज टुमा शुरू भएको पाइन्छ । जस्तै उदाहरणको रूपमा नागरिक एपलाई लिन सकिन्छ । हाम्रो कम्पनी पनि यस्तै सेवा दिन सधै तत्पर छ ।
नागरिक एप परियोजनालाई चाहिँ मैले एकदमै सराहनीय काम भन्छु । यो समाजको लागि ठूलो योगदान हो । नागरिक एपबाटै सबै कुरा गर्न सकिने भएपछि त्यसले धेरै सजिलो बनाएको छ । अबको समय भनेको डेटा एक्सचेन्जको हो । त्यसकारण अहिले हामी फेज टुमा छौं भन्न मिल्छ होला ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कस्ता कस्ता चुनौती छन् ?
शुरूवाती दिनमा विद्युत, इन्टरनेट लगायतको समस्या थियो । अहिले त्यो धेरै हदसम्म समाप्त भएको छ । अर्को ठूलो समस्या भनेको जनशक्तिलाई नेपालमै राख्न नसक्नु हो । अरू एजेन्सीभन्दा हाम्रोमा अलि कमै छ । किनभने आधारभूत मानव संसाधन (एचआर)का सिद्धान्तलाई पछ्याउने प्रयास हामीले गरेका र्छौं ।
ट्यालेन्टलाई कामको राम्रो अनुभव र ग्रो गर्ने लगायतका वातावरण सिर्जना गरिरहेका छौं । फरक फरक डोमेनमा काम गर्ने भएकाले पनि हामीलाई अलि चुनौती नै महशुस हुन्छ । फरक फरक डोमेनमा काम गर्दा नयाँ कुरा पनि सिक्न पाइन्छ र मोनोटोनस पनि हुँदैन् ।
कोभिडको समयमा बजारमा निस्केका विद्यार्थीको आधारभूत सीपमै कमजोरी छ । भर्खर जोइन गरेको पाराको छ । हामीले भोगेको मुख्य समस्या हो, यो । एक त उहाँहरूको कलेज पनि भएन । अनलाइन कक्षा पनि विद्यार्थीले त्यति ध्यान दिएर पढ्दैनन् । १-२ वर्षसम्म यसले दुख दिन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई ।
हामीले एनसीआईटी कलज, सीआईटी कलेज, केसीसी कलेजसँग मिलेर पनि काम गरिरहेका छौं । इभेन्ट, मोटिभेसन र प्रोजेक्टमा समेत सहयोग गरिरहेका छौं । अर्को कुरा मार्केटमा एउटा मापदण्ड छैन् ।
अहिले सूचना प्रविधि विभागले गभर्मेन्ट इन्टप्राइजेज आर्किटेक्चर (जीईए) निकालेको छ । हामी आफै पनि जीईएको परामर्शदाता हौं । यो लागु हुँदै गयो एउटा मापदण्ड बन्छ, बजारमा गुणस्तरीय सफ्टवेयर आउँछन् र सरकारले पनि गुणस्तरीय सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ध्यान दिन्छ ।
ट्यालेन्टलाई नेपालमै राख्न के गर्नुपर्ला ?
ट्यालेन्टलाई नेपालमै राख्न एउटा वातावरण नै सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिलेको नयाँ पुस्ताले क्वालिटी अफ लाईफ अर्थात गुणस्तरीय जीवन खोजिरहेको छ । क्वालिटी अफ लाइफ दिन सकियो भने ट्यालेन्टलाई यही राख्न सकिन्छ ।
हामी पनि अहिले त्यसैमा केन्द्रित छौं । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि थोरै परिवर्तन गर्नुपर्छ । शिक्षालाई अनुसन्धान र अभ्यासमा आधारित बनाउनु पर्छ ।
क्वालिटी अफ लाइफको वातावरण यहाँ तयार नहुन्जेलसम्म ट्यालेन्ट राख्न गार्‍हो देख्छु म । यो फरी एकजनाको काम मात्र होइन्, सबैले आ-आफ्नो डोमेनबाट काम गर्नुपर्छ ।
तपाईहरूका आगामी योजनाहरू के के छन् ?
विभिन्न प्रडक्टमा काम गरेका थियौं, त्यसमा निरन्तरता दिन सकेनौं, सेवामा बढी केन्द्रित थियौं । अबको १ वर्षमा हामी केही प्रडक्टहरू सार्वजनिक गर्दैछौं ।
हामीले सिंगापुरमा पनि कार्यालय खोल्दै छौं । केही वर्ष देखिको योजना थियो, कोरोनाले केही ढिला भयो । अब त्यतातिर पनि पहल गर्दै छौं । सानो सानो एप्लिकेसन र प्रोजेक्टका लागि छुट्टै युनिट खडा गर्दै छौं ।
अहिलेको जमाना सहकार्य (कोलाबोरेसन) को हो । कुनै प्रोजेक्टमा मिलेर काम गर्नुपर्नेछ वा केही सहयोग गर्नुपर्ने छ भने हामी तयार छौं । हाम्रो सूचना प्रविधि उद्योगलाई अझ वृद्धि गर्नुपर्छ ।
यहाँको रिसोर्सलाई पनि ग्रुम गर्नुपर्छ । आईटीका प्रयोगकर्तालाई पनि ग्रो गर्नुपर्छ । हामीसँग कोही मिलेर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।